Liisaska guryaha Iibka iyo Ijaarka gudaha Gurgaon, Haryana
1 - 10 ee 9401 Liisaska
Gurgaon, oo si rasmi ah loogu magacaabay Gurugram, waa magaalo ku taal gobolka waqooyiga Hindiya ee Haryana. Waxay ku taalaa meel u dhaw xadka Delhi-Haryana, oo qiyaastii 30 kiiloomitir (19 mi) koonfur galbeed ee caasimada cusub ee New Delhi iyo 268 km (167 mile) koonfur ee Chandigarh, caasimada gobolka. Waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee dayax-gacmeedka ee Delhi waxayna qayb ka tahay Gobolka Qaranka ee Hindiya. Laga soo bilaabo 2011, Gurgaon waxaa ku noolaa dad tiradoodu dhan tahay 876,900.Gurgaon wuxuu noqday xarun horseed u ah dhaqaalaha iyo baananka ee Hindiya ka dib Mumbai iyo Chennai. Sheekada kobcinta dhaqaalaha magaalada ayaa bilaabatay markii hogaamiyaha soo saaraha gawaarida Hindida ee Maruti Suzuki India Limited ay ka sameysay warshad wax soo saar magaalada Gurgaon 1970-yadii. Maanta, Gurgaon waxay leedahay xafiisyo maxalli ah oo ka badan 250 Fortune 500 oo shirkadood. Gurgaon waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u sarreeya oo ku yaal Tusmada Horumarka Aadanaha, oo leh HDI oo ah 0.889 (2017), kaas oo sidoo kale ah kan ugu sarreeya Hindiya. Muuqaalka Hawada iyo Greenpeace.